Qofka Wax Ku Mergeda
USA, 22 Feb 2014 (Alldhooftinle.com)
Xakiim Bin Jacar Almakhzuumi Oo Dadweynaha Baraya Sida Loo Caawin Karo Qofka Cunaha Ama Dhuunta Wax Joogsadeen.
Mergashada ama qofka oo dhuunta wax is taagaan waxay keentaa in qofku neefsan kari waayo, taasoo sababi karta geeri ama dhaawac maskaxeed. Mergashada ayaa u qaybsanta laba qaybood. Tan hore waa qofka oo neefsan karaya oo hawa mareenkii qayb ayaa furan, taasoo kale waa sahlan tahay waxaadna u daynaysaa inuu qofku maareeyo hadii uu caawimo u baahdana waad caawinaysaa.
Qaybta labaad ee margashada ayaa ah iyadoo qofkii aanu neefsan kareyn sidaa darteed waa inaad u gurmataa qofkaa dhiban. Ugu horeyn xusuusnow qaciidada ah shan iyo shan. Taas macnaheedu waxaa weeye inaad qofka xaga danbe ka marto isla markaana labadaada gacmood calooshiisa ku soo qabato (xundhurta ama xuddunta dusheeda) adigoo gacmahaaga mid ka mid ah ka dhigaya inaa feedhtamayso oo kale tan kalena dusha ka saaraya. Labadaada gacmood oo wada socda ku guji caloosha qofka adigoo sidii inaa kor u qaadayso iska dhigaya.Shan jeer waa inaa samaysaa fiiri sawiradan.
Haddii weli dhibtii jirto bilow inaad labada garab dhexdooda ka garaacdo shan jeer sida aad sawiradan ku aragto. Waana mid ka mid ah siyaabaha loola tacaalo margashada. markaa shanta jeer dhamayso ku noqo qaybtii hore oo shan jeer samay hadana. Haka garaacin qofka qoorta ama surka taasoo keeni karta inuu qofka soo gaadho dhaawac weligiis ah.
Caruurta da'doodu ka yar tahay hal sano lama mid aha dadka waaweyn sidaa darteed ugu horeyn eeg ilmaha afkiisa inaad ka soo saari kartid waxaa ku jira. Markaa ka dib foorori ilmaha yar waana in afkiisu ka hooseeyaa calooshiisa ka dibna ka garaac labada garab dhexdooda shan jeer sida sawirda ka aragtid.
Intaa ka dib dhinaca kale u rog ilmaha yar waxaana labadaada farood ku riixda halka feedhaha ku dhamaadaan shan jeer. hadii weli dhibkii jiro ku noqo habkii hore ee foororinta ahaa. sawiradan hoose ayaa ku tusaya habka aad labada farood ugu riixayso laabta ilmaha yar.
Hadii aad keligaa tahay waxaad samayn kartaa inaad labadaada gacmood calooshaada ku gujiso, uma xoog badna sidii qof kale kuu samayn lahaa laakiin waa kuu shaqayn kartaa. Waxaa kale oo aad samayn kartaa inaad wax adag raadsato sida kursi isla markaana gacmahaaga iyo kuriga ku gujiso ama ku riixdo calooshaada.